फायर एण्ड मोर फायर टु प्रचण्ड !
मलेसियाको कुचिङस्थित सरावक मैदान मङ्गलबार साँझ वर्षाका कारण हिलाम्मे थियो । त्यहीँ मैदानमा एसियाली फुटबल महासङ्घले आयोजना गरेको एएफसी सोलिडारिटी कपको उपाधि जित्न नेपालले प्रतिद्वन्द्वी मकाउविरुद्ध घम्साघम्सी गरिरहेको थियो । खेलको निर्धारित समय सकिँदा नेपाल १ गोलका साथ उपाधि उचाल्न सफल बन्यो, संसारभरका नेपालीको मन मुटु विजयी उल्ल..
वैदेशिक रोजगारले निम्त्याउँदै छ घरघरमा सम्बन्ध विच्छेद
अहिले मुलुकमा वैदेशिक रोजगारले हरेक नेपालीको घरघरमा रोजगार दिएको छ । जसले गर्दा हरेक नेपाल..
सुजाता कोइरालालाई खुलापत्र : तपाईंलाई निको हुँदा देश रोगी नहोस्
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाज्यू सादर नमस्कार । म कुनै पाटीको नेता, कार्यकर्ता हो..
सुजताको क्यान्सर र गगन थापाको सेन्सर
झण्डै एक दशकअघि एक साप्ताहिक पत्रिकामा माननीय सुजता कोइरालाका केही तस्बिर प्रकाशन भए । त्य..
त्रिभुवन कि महारानी अङ्गीकृत !
संविधान निर्माणसँगै मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको हो तर त्यो नुहने भ..
प्रचण्ड कामरेडको मुद्दा हराएको दिनः बहिर्गमन लडाकुहरू बिचल्लीमा
‘अरूका लागि लड्यौँ पटक–पटक, आफ्नो स्वाभिमान, पहिचान र अधिकार प्राप्तिको निम्ति लडौ अन्तिम पटक’ यही नारा लिएर लाउलाउ खाउखाउ उमेरका युवा–युवतीहरू काखमा अनारी बालबच्चा च्यापेर सपनाको दरबार पेरिसडाँडामा अधिकार माग्न आए । जो अरूका लागि जीवनलाई आहुति दिएर मर्न तयार हुँदाहुँदै बाँचेर आएका हुन् । यस्तै धेरै लक्का जवान परिवर्तनको समरमा क..
पुरुषको लगाममा महिला कहिलेसम्म ?
ऋतु मेरो समीप आउथिन्, घण्टौँ मेरो घरमा बस्थिन् । दुःखका आर्तनादहरू खोल्थिन् । हामीबीच रगतको नाता त थिएन । तैपनि आफ्नै दिदी ठानेर मन खोल्थिन् । म पनि अपनत्व पाएको महसुस गर्थें । म उनको पीडा बिसाउने माध्यमजस्तै थिएँ । उनी मसँग रूँदा आफ्नो मन हलुका भएको महसुस गर्थिन । एउटी पीडामा पिल्सिएकी नारीको दुःखमा […]
यी नेताले संसदमा मुख देखाउँदा के बिग्रन्छ ?
केही साता अघि सांसदको तलब भत्ता बढ्यो । घरभाडा र यातायात भत्ता पनि बढ्यो । महंगी बढेको अनुपातमा र राष्ट्रिय तलबमानसंग मिलान गर्न उनीहरुको तलबभत्ता बढाइएको हो । यही क्रममा अब केही समयमा राष्ट्रपति सहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पनि तलब बढ्नेछ । उनीहरुको तलब किन बढाउने ? प्रश्न उठ्छ । तलब किन बढाइएको हो भने […]
सरकारका सय दिनका उपलब्धि
सरकारको मुख्य काममध्येको एक महत्वपूर्ण काम विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिनु हो । यही सम्झौताको आधारमा नेपालको व्यवस्था परिवर्तन भयो र जनप्रतिनिधिले नेपालको संविधान २०७२ जारी गरे । राज्यको पूरै संरचनाको प्रवन्ध गरिए पनि शान्ति प्रकृया समापन भएको छैन । जनयुद्ध कालीन घटनाबाट पीडित र पीडक भनी आरोपित व्यक्तिहरु सधैँ मानसिक पीडा..
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवश्यकता
संसारको नजरमा अमेरिका शक्तिशाली मुलुकका रूपमा स्थापित छ । त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हुने राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको छ । देश र जनताका लागि असल काम गर्ने राजनीतिक दलले मात्र राज्यसत्तामा पुग्ने अवसर पाउँछन् । निर्धक्कसाथ आफ्नो कार्यकालभरी काम गर्ने मौका पनि पाउँछन् । असल काम गरे जनताले फेरि मूल्याङ्कन गर्..
लागू औषध दुव्र्यसनमा जेलिएका महोत्तरीका युवा पुस्ता
लागू औषध भनेको त्यस्तो प्राकृतिक तथा कृत्रिम रासायनिक पदार्थ हो जसको सेवनले मानिसको शारीरिक तथा मानसिक जीवनमा असर पर्दछ र चेतनशील अवस्थाबाट अर्धचेतनशील अवस्थामा लगी आनीबानीमा फरक पार्दछ । यसको प्रयोगले शारीरिक कार्य तथा वनावटमा नै परिवर्तन ल्याउँछ । लागू औषधको सेवनले मस्तिष्क र रक्तसञ्चार प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्दछ । ल..
सरकारको हनिमुन समाजिक सञ्जालमा
२६ गते शुक्रबार बेलुकी सामाजिक सञ्जालमा एकाएक सनसनी फैलियो । यो पङ्क्तिकारको लिस्टमा भएका प्रायः सबै साथीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गाली गरिरहेका थिए । त्यही दिन सरकारले १०० दिन पूरा गरेको उपलक्ष्य पनि थियो । उपलब्धिभन्दा धेरै आलोचनाले सरकारको हनिमुन पिरियड भरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले त्यही समयमा सामाजिक सञ्..
माधव कमरेड, कम्युनिस्ट आफैँ समाप्त हुन सक्छन्
#8230;संविधानसभा पहिलो निर्वाचनदेखि कम्युनिस्ट शक्तिको बाहुल्य रहे पनि बेलाबेला त्यसविरुद्ध षड्यन्त्र हुने गरेको छ । …अमेरिकाले रुससँग राम्रो सम्बन्ध राख्यो र राम्रैसँग कम्युनिस्ट समाप्त पारिदियो । …यस्तै प्रयास नेपालमा समेत भइरहेको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल झपेन्द्र मनोज स्मृति भवन उद्घाटन समारोह, २०७३ कात्ति..
धरापमा परेको सङ्घीयता
नेपाल विश्व मानचित्रमा अन्य धेरै मुलुकभन्दा क्षेत्रफलको हिसाबले सानो मुलुक हो । यहाँ एक सयभन्दा जात जातिको बसोबास छ । लगभग चालीसभन्दा बढी विभिन्न प्रकारका भाषा बोल्ने भाषाभाषी बसोबास भएको देश हो । नेपाल आफैं पनि सानो मुलुक त्यसमा पनि आर्थिक हिसाबले गरिब देश, यस्तो अवस्थामा अवस्थित देशले सङ्घीय प्रदेशको मोडालिटीमा जाने मुद्दा दिन..
भारतीय सत्तापक्षले बुझ्नैपर्ने विषय
भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपालको तीन दिने भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्किनुभएको छ । नेपालमा आफूले पाएको आतिथ्यबाट आफू प्रफुल्लित भएको प्रतिक्रिया दिँदै मुखर्जी आफ्नो देश फर्किनुभएपछि नेपालमा मुखर्जीको भ्रमणबाट के उपलब्धि भयो भन्नेबारे चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । लगभग दुर्ई दशकपछि भएको भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण स्वा..
काङ्ग्रेस आत्महत्याको साक्षी !
प्रचलित मूल्य, मान्यता र परम्परागत सोच, संस्कार तथा धर्मप्रति नकारात्मक, आलोचनात्मक या विद्रोहात्मक सोच भएका मानिसलाई वामपन्थी भनिन्छ । राजाका आलोचकहरू, राजाका प्रस्तावप्रति प्रायः नकारात्मक सोच राख्नेहरू र विद्रोही मनोवृत्ति भएकाहरूलाई बेलायती संसद्मा राजाको बायाँहाततर्फ बस्ने व्यवस्था मिलाइन्थ्यो भने धर्म, परम्परा, प्रचलित साम..
भारत, मुखर्जी भर्सेज हामी नेपाली !
हाम्रो इतिहास र परम्परा इण्डस नदीको सभ्यता र नामबाट बनेको इण्डिया (भारत) र आफैँमा अनेक अर्थ बोकेको नेपालबीच धेरै समानता र थोरै भिन्नता रहेको छ । समानता यस मानेमा की (१) हामी सिन्धुघाटिको आर्यन सभ्यता, मङ्गोलियन र द्रविड सभ्यता आदि मिसिँदै यहाँ आएका हौँ । कालान्तरमा अनेक उथलपुथल, बदलाभएका बाबजुद भौगोलिक रूपमा अलग–अलग स्वतन्त्र रा..
देवकोटाको जन्मजयन्ती चाहिं किन तिथिमा ?
प्रत्येक वर्ष तिहारताक महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको जन्मजयन्तीको अवसरमा नुवाकोटको झिल्टुङमा महाकवि देवकोटा साहित्य प्रतिष्ठानले साहित्यिक कार्यक्रम गर्दोरहेछ । कार्यक्रममा राजधानीबाट राष्ट्रियस्तरका ख्यातीप्राप्त साहित्यकारहरुलाई अतिथीको रुपमा बोलाउने गरिएको रहेछ । अनि अतिथी व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउने काममा खट्ने मित्र च..
चाडपर्वसँग गाँसिएको राजनीतिक दुष्चक्र
‘दशैं–तिहार आयो, खाउँला पिउँला, रमाइलो गरौंला’– यो भनाईलाई विस्थापित गर्दैछ यो भनाईले–‘दशैं–तिहार र छठ गयो, अब दुख पाउँला !’ हो, दशैं–तिहार र छठको रमाइलो सकिएपछि नरमाइलो दिनहरु अब फेरि सुरु हुनेछन् । नरमाइलो दिनको दुष्चक्र सुरु भएको दुई दशकभन्दा धेरै भयो । यसपटक पनि एकखाले नेताहरुले केही साता पहिलेदेखि छठपछि आन्दोलन गर्ने धम्की ..
सिस्टीसरकोसीस, न्युरो सिस्टीसरकोसीसको के छ जनस्वास्थ्यमा सरोकार ?
पृष्ठभूमि सिस्टीसरकोसीसलाई सुँगुर प्रजातिमा हुने टिनिया सोलियम नामक फित्ते जुकाका कारण जनसमुदायको सम्पूर्ण शरीरमा परजीवीजन्य सङ्क्रमण गराउने रोग मानिन्छ । यो परजीवी मानिसको शरीरमा प्रवेश गरेपछि विकशित हुने विशिष्ठ पानीका थैला जसलाई सिस्ट भनिन्छ, जुन शरीरका विभिन्न भाग जस्तैः केन्द्रीय स्नायु प्रणाली, शरीरका विभिन्न भागका मासुजन्..
साझा पर्व छठको बिदा बढाइयोस्
छठ पर्व विस्तारै सम्पूर्ण नेपालीको पर्व बन्दै गएको छ । आजभन्दा २० वर्ष पहिले तराई मधेसमा मात्रै मनाइने यो पर्व पहाडी जिल्लाका साथै राजधानीमा समेत मनाउन थालिएको दशकौं भइसकेको छ । सबै साझा पर्वका रुपमा विकसित भइसके पनि छठ पर्वप्रति राज्य गम्भीर बन्न सकेको छैन । अर्थात् छठ पर्वप्रति विभेद गरिएको देखिन्छ । नेपालमै २० […]
बेलायतमा मानवअधिकार खोज्दै मायाँकुमारीहरू
खोटाङको बुईपा गाउँमा गल्ला पसेको हल्ला सुनेको । बुईपाका दहमानको छोरा अमृतबहादुर राईलाई भर्ती लाग्ने इच्छा पटक्कै हुँदैन । आमा र चेलिहरूको सल्लाहअनुसार अमृतबहादुर घरको खाटमुनी लुक्छन् तर पनि गल्लावालहरूले प्रलोभनसहित जबरजस्ती गरेर खाटमुनीबाटै तानेर भर्ती गराउन लैजान्छन् । यो कथा नभएर वि.सं. २०१८ सालमा भएको सत्य घटना हो । अमृतबहाद..
आहुतिलाई प्रा.डा. बद्रीविशालको जवाफः कम्युनिस्टको दसैँ तिहार बहिष्कार उग्रवाद
रातोपाटी अनलाइन पत्रिकामा प्रसिद्ध प्रगतिवादी स्रष्टा, चिन्तक तथा लेखक आहुतिको कम्युनिस्टले किन मनाउँदैन तिहार ? शीर्षकको लेख पढेर यसमा आफ्ना तथ्य र तर्कसहित प्रतिवाद पत्र लेखिएको हो । आहुतिको विचार यस्तो थियो : कम्युनिष्टले किन मनाउँदैन तिहार ? आहुतिले दसैँ, तिहार र छठलगायत पर्व कृषि युगमा सुरु भएको बताएका छन् । कृषि बाली लगाए..
राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणः कुटनीतिक सन्तुलनको नयाँ आयाम
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी भाइटिकाको भोलीपल्ट नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । करिब अठार वर्षपछि भारतका राष्ट्र प्रमुखबाट हुन लागेको यो भ्रमणको ऐतिहासिक र कुटनीतिक महत्व छ । यो भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धमा निकट अतितमा उत्पन्न तिक्तता र बैमनस्य हटाउने र हार्दिकता थप्ने विश्वास गरिएको छ । भारतबाट बिगतमा थोपरिएको अघोषित नाकाबन्दीका का..
जहाँ भगवान् नै अछूत भए !
सुदूरपश्चिमा कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका वडा नं. २ मोतियाफाँटामा स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम÷पुनर्वास नगरपालिकाले नागरीक सचेतना केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरेको गतिविधि स्थलगत अनुगमन गर्ने क्रममा म त्यहाँ पुगेको थिएँ । मोतियाफाँटा राज्यले बिर्सेको बस्ती जस्तै छ । गुजुमुज्ज छाप्राको घनाबस्ती एक घरमा एक अर्को घर..